#Macron oo booqasho ku maraya Bariga Afrika Inkastu sii fidaayo Ganacsiga Shiinaha ee Qaaradda - Get Latest News From Horn of Africa
#Macron oo booqasho ku maraya Bariga Afrika Inkastu sii fidaayo Ganacsiga Shiinaha ee Qaaradda
By axadle On Mar 13, 2019 Last updated Mar 31, 2019
Madaxwaynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa booqday Jabuuti oo horay u ahaan jirtey Dal uu soo gumeystey Isniintii, isagoo ballan-qaaday in uu iskaashiga ku dhisan “ixtiraam iyo Qadariin” in uu la yeelan doono in kastoo ay sii kordhayso mashariicda uu Shiinaha ka fulinaayoo africa, kaas oo si xawli ah isugu ballaarinaya danaha uu ku leyahay qaaradda.
Labadaba Paris iyo Beijing – sidoo kale Japan iyo Maraykanka – waxaay ku leeyihiin xarumo millatari oo ku yaala waddanka ugu yar ee Bariga Afrika sababtoo ah goobta istiraatiijiga ah ee uu ku yaal awgeed iyada ooay ku taal jibuuti dariiqa maraakiibta ay isaga goosha ee loo yaqaan Suez Canal.
Macron wuxuu ku tilmaamay Jabuuti, Meeshi ugu dambaysay ee ka madax banaanata Faransiiska – sannadkii 1977 – wuxuu ahaa “Wadan Iskaashi naga dhexeyey iyo isbahaysiga muhiimad gaar ah noo laha” iyo halka ay ku taal oo ah”Albaabka laga soo galo” ee Geeska Afrika.
Goobta juqraafi ahaan ay ku taal waxaay ka dhigeysa saldhigga rajada Jabuuti ee ah iney noqoto xarun weyn oo ganacsi.
Laba sano ka hor, waxaa xariga laga jarey dekedda cusub ee ugu weyn geeska africa – oo qeyb ka ah ballaarinta kaabayaasha dhaaqale ee dalka jibuuti, oo qayb ahaan ay maalgeliyeen Shiinaha, sidoo kale ay ku jiraan saddex dekedood oo kale iyo wada xadiidka oo isku xireysa caasimadda Itoobiya iyo dalka jibuuti.
Madaxwaynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa rajeynaya in uu dalka ka dhigoo “Dubai da cusub” Isaga oo tartan ganacsi kula jira dekedaha kale ee Africa ee xad dhaafka ah ee buuxa Sidaa Dekeda Mombasa ee Kenya.
Haddaba Djibouti Waxay u ogolaataay Shiinaha in ay gaaraan Afrika iyo Yurub iyaga oo usoo marayo Badweynta Hindiya.
Mashruucan waxaa loo arkay Jaangooyo lagu hayo dalalka soo koraya ee Asia iyo Africa oo la siiyo lacag aad u badan si ay u horumariyaan kaabayaasha dhaqale taas oo abuuri karta xadiida ganacsi mustqbalka.
Laakiin Sanduuqa Caalamiga ah ee Lacagta Aduunka ayey ka soo yeertey qaylodhaan ku adaan kororka deynta lagu leyahay Jabuuti ee sii kordhaya 50% sannadka 2014 halka uu ka noqdey 85% sannadka 2017.
Macadka Hindisaha baadhitaanka China-africa ee fadhigiisu yahay Mareykanka ayaa 2017 ku qiyaasay dayntii Jabuuti uu ku leyahay shiinahu in ay tahay ilaa $ 1.3 bilyan oo doolar.
“Ma doonayno maalgashiga caalamiga ah in uu wiiqo awooda shuraakadayada Qaaska ah,” Macron ayaa sidaas yiri Talaadadii, isagoo taas ula jeeda joogitaanka Afrika ee shinaha oo sii kordhaya.
“Shirkadaha Faransiiska waxay awoodaan inay soo bandhigaan iskaashi xushmad leh oo isfahan ku dhisan waxna aan uu dhimeyn madaxbanaanida dalkiina,” ayuu madaxweynuhu ku daray hadalkiisa.
Geelle, oo naftiisa ku tilmaama in u yahay “saaxiibka wanaagsan ee Shinaha” markii uu booqdey madaxweynaha Xi Jinping sanadkii 2017, Waxaa uu usheegay Macron: “Waxaa uu banaan fursado shirkadaha Faransiiska ah, gaar ahaan dhinaca dhismaha dhulka.
“Waddankayagu wuu furanyahay oo cidkaste way maal gashan karta,kamusan rajo dhigin wali in Faransiisku ay kor u qaadi karto maal-galinteeda ku aadan Jabuuti.”
Dhanka kale Emmanuel Macron ayaa booqasho ku tagay dalka Ethiopia, waxana ay booqashadan qayb ka tahay safar uu ku marayo dhawr wadan oo geeska Afrika.
Waxaana madaxweynaha ku qaabilay garoonka Magaalada Taariikhiga ah ee Lailibela Ra’isulwasaaraha Itoobiya Dr Abiy Axmed.
Macro ayaa la qorsheeyay inuu ka qeyb galo casho sharaf oo ka dhici doona magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa. Arbacada, wuxuuna la kulmi doonaa hogaamiyayaasha Midowga Afrika ka hor inta uusan safar ku tagin Dalka kenya oo uu noqon doono madaxweynihii ugu horeyey oo Faransiis ah oo boqda Kenya.
Khamiista, wuxuu ka qayb gali doonaa Shirweynihii “One Planet” ee Nairobi ka dhacaya oo loga hadli doono isbedelka cimilada.
Laba kulan oo siyaasadeed ayaa lagu soo waramayaa in barbar soocon doonan munaasabadda Shirka Caalamiga ah ee loo yaqaan “One Planet Summit”, iyada oo laba madaxweyne oo dhawaan la doorto ay la kulmi doonan macron.
Madaxweynaha Etienne Tshisekedi ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo iyo Madaxweynaha Madagaskar Andry Rajoelina ayaa kulan la qaadan doono hogamiyaha faransiiska.
Rwanda ayaa sidoo kale ku martiqaaday Macron in uu ka qayb galo sannad-guuradii 25aad ee xasuuqii dagaalkii sokeeye ee 1994tii kaas oo galaftey 800,000 oo muwaadiniin ah.
Mas’uuliyiinta Rwanda ayaa muddo dheer ku eedeeynayey Faransiisku in ay ka dambeeyeen xasuuqaas. Macron ayaan sheegin haddii uu ka qayb gali doono Sanad guuradaas 7da Abriil ee caasimada Kigali ka dhacaysa.